Shona language Russia yakashandisa rusvingo rwakagadziridza kuvhara rug rolling machine
rusvingo rwakasara ruvara rwepepa resimbi rine maitiro akanaka uye ruvara ruvara. Iyo yakawanda inoshandiswa mumunda, fekitari, nzvimbo, hotera, mafirimu hall, vacationland, mapurisa ekare uye villa yemazuva ano.
rusvingo rwakagadzirwa nemicheka yepepuru purogiramu yekugadzira mishandisi inotengeswa zvikurukuru kutengeswa kuRussia, kgyzstan, Uberkistan uye aroud nyika. Vanoda C8 T8 yakagadzirwa nemashizha epepuru yekugara kweimba.
Rusvingo rwakafanana ruvara rwakagadzirwa nemashizha epurasitiki isati yavhara iyo coil iri 1250mm, mashandisirwo emashandisirwo emapuranga akaumbwa nesimbi.
Iyo yakazara rusvingo rwakagadzirwa nemashizha epepta rakagadzirisa mutsara wemichina inosanganisira decoiler, mafomu ekuumba mafomu, kombiyuta yekutonga system uye kubuda patafura.